Wararka shirkadda - Wararka - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd. - Page 1
Hoyga > Wararka > Wararka shirkadda
Sidee barashada baleetku u saameysaa jirkaaga?
Barashada baleedka mudo dheer runti waxay dadka ku qancin kartaa dabeecad qurux badan, taas oo waliba sabab muhiim ah u ah in dad aad u tiro badan oo caadi ah ay galaan ballet. Laakiin faa iidooyinka barashada balletku aad ayey uga culus yihiin isbeddelada dabeecadda, haddaba saamayn intee le'eg aya......
Da'dee ayuu ilmuhu ku bilaabanayaa inuu si fiican u barto baleetiga?
hildren waxay baran karaan balet-ka laga bilaabo da'da 4 ilaa 15, ka dib da'da 10 da'da ee suulka, laakiin habab tababar oo habboon, ilmaha da'da suulka ayaa lagu hormarin karaa.
Waa maxay dharka ballet tutu?
Maanta dugsigu wuxuu ku siin doonaa isbarasho kooban oo ku saabsan goonnada qabow ee baleedka.
Goonyaha baleedka Tutu, wuxuu ahaa mid qurux badan boqollaal sano
Gabar kasta waxay leedahay khiyaal qurux badan oo ku saabsan goonnada. Dharka Tutu ee baleedka ayaa ah gogol qancin kara dhammaan fikradaha qurxoon ee gabdhaha. Tufaax iyo iftiin, gabar kasta oo xidhan goonno qurux badan oo huruud ah ayaa hubaal nafteeda u maleyn doonta inay cirfiid ku tahay sheekad......
Hordhaca baleedka kaydinta TUTU iyo qaadista
Maqaalkani wuxuu inta badan ku saabsan yahay kaydinta iyo qaadista tuute. Sida ugu wanaagsan ee loo qaadan karo dharka tuute waa in lagu rido boorso gaar ah. Haddii kale, way fududahay in la dhaawaco tuutada baleedka haddii aad si caadi ah u qaadatid. Haddii aysan suurta gal ahayn inaad si siman u q......
Horaantii xilligii Ballet-ka Jacaylka, dharka baleedka ayaa bilaabay inay horseed u noqdaan isbeddellada moodada, sida Tarrioni timo "cirfiid" iyo madaxa "cirfiid", oo haweenka reer Paris waxay ku yaaceen inay ku daydaan qaabkeeda, iyadoo nashqadeeyayaasha moodadu ay soo bandhigeen caanno "koofiyado......